Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A July 2011 (5)
Q and A July 2011 (5)
၁။ ရောင်နေရင် စိုးရိမ်ရပါသလား။
၃။ နေရထိုင်ရ အနေကျပ်ပါတယ်။
၄။ ခံစားချက်လည်းမရဘူး ဖြစ်နေတယ်။
၅။ Today we had unprotected sex
ကျွန်တော့် အမေသည် အသက် ၆၂ နှစ်ခန့်ရှိပါပြီ။ သွေးတိုးရှိပါသည်။ ဆေးခန်းလည်း သွားပြနေပါသည် ဆရာဝန်မှ အစာအိမ် ရောင်နေတယ်လို့ ပြောပါသည်။ အစာအိမ်ရောင်လျှင် ခြေလက်များ ရောင်နေတတ်သလား။ ခြေလက်များ ရောင်နေရင် စိုးရိမ်ရပါသလား။
• သွေးတိုးနဲ့ ကိုယ်ရောင်တာ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အစာအိမ်ရောင်လို့ ကိုယ်မရောင်ပါ။
• ငန်တာကို လုံးဝဖြတ်စေပါ။ လူမဝအောင်ဂရုစိုက်ပါ။ ငန်တာ၊ အဆီ၊ ဆီ နဲ့ အချိုတွေ ရှောင်ပါစေ။
• သွေးကျဆေးကို အမြဲမပြတ်သောက်ရမယ်။ နည်းတာ များတာသာ ကွာမယ်။
ကျွန်တော်တို့ လူငယ်လောကမှာ ခေတ်စကားအရ ပြောနေကြတာတွေရှိပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဂျီစပေါ့ဆိုတာ ရှိတယ်တဲ့။ အဲဒါ အမှန်ပဲလား။ တကယ်တန်း ရှိခဲ့ရင်လည်း ဘယ်နေရာမှာရှိပြီး အဲဒါက ဘယ်လိုမျိုး အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ် ဆိုတာ သိလိုပါတယ်။
ကျွန်တော့် အသက်က ၃၀ ထဲရောက်နေပါပြီ။ လက်ရှိကိုယ်အလေးချိန်က အရမ်းကို သိသိသာသာ တက်နေပါတယ်။ ကီလို ၉၅ လောက် ဖြစ်နေပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလည်း မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ အလုပ်ကလည်း ထိုင်ပြီးလုပ်ရတဲ့ အလုပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ အစားကို လျှော့စားပေမဲ့ သိသိသာသာ ကျမသွားပါဘူး။ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်အောင် ဘယ်လိုဝိတ်လျှော့သင့်ပါသလဲ။ ဘယ်လိုဆေးမျိုးကို သောက်သင့်ပါသလဲ။ တလတကြိမ်လောက် ဝမ်းနှုတ်ပြီး ဝိတ်ချဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပေမဲ့ သိပ်အဆင်မပြေပါ။ ဆေးပညာရှုထောင့်အရ မှားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
• Weight loss ပိန်ချင်သလား
• Female orgasm အမျိုးသမီး ပြီးခြင်း အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၁၃)
အုန်းလွဲသလို ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ တယောက်ပါ။ အခု အဲဒါဟာက မပျောက်သေးလို့ပါဆရာ။ အခုဆိုရင် ၂ လ ကျော်ကျော်လောက် ရှိနေပါပြီ။ နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသင်နေတဲ့ ကျောင်းသားပါ။ ဆေးရုံကို ပြပြီးပါပြီ။ သူတို့က ဆေးစစ်သလို ချွဲ၊ သလိပ်၊ ဆီး၊ သွေးတွေ စစ်ပါတယ်။ ဓာတ်မှန်ကတော့ တော်တော်များများ ရိုက်ပြီး စစ်ပါတယ်။ လည်ပင်းနေရာလဲ ရိုက်ပါတယ်။ သူတို့က ketonal (ketoprofen) ဆေးလိမ်းဖို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်ဖြစ်တာ Хондроз (Hondroz) နာတာရှည်လို ပုံစံမျိူးဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဂုတ်ပိုးက အကြောနေရာမှာ ရောင်ရမ်းတာ၊ ဖုနေတာ ဖောင်းနေတာ တခုမှ မရှိပါဘူး။ နာကျင်တာ အရမ်းကြီးလဲ မခံစားရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နေရထိုင်ရ အနေကျပ်ပါတယ်။ တခါတလေတော့ ပခုံးက အကြောတက်သလို ခံစားရပါတယ်။ ရာသီဥတု အေးတဲ့အချိန်မှာ ဆိုရင်တော့ သာမန်ထက် ပိုပြီး pain ကို ပိုခံစားရပါတယ်။ ဆိုးမသွားသလို ပျောက်လဲ ပျောက်မသွားလို့ စိတ်ညစ်နေလို့ပါ။ ရေနွေးအပူလဲ ပေးပါတယ်။ ဆေးလဲ လိမ်းပေးပါတယ်။ ခေါင်းအုံးကို ပါးပါးလေးပဲ အုန်းပါတယ်။ သောက်ဆေးတော့ မသောက်ဖြစ်ပါဘူး။ ဆေးက အင်္ဂလိပ်ဆေးလိုမျိုးဆိုရင် ဒီမှာ အရမ်းဝယ်ရခက်ပါတယ်။ ဘယ်လိုနေထိုင်ပြီး ဘယ်လိုကုသလျှင် ပိုပြီး သက်သာ ပျောက်ကင်းမလဲဆို လမ်းညွန်ပေးပါ။
• Хондроз Hondroz ဆိုတဲ့ မူရင်း ရုရှားကို အင်္ဂလိပ်ပြန်ရင် Osteochondrosis ခေါ်တယ်။ အရိုး-အရိုးနုရောဂါ တမျိုး ဖြစ်တယ်။ (ပုံမှာ ပြထားပါတယ်။)
• နာတာရှည်တတ်တယ်။ လူသာမက အကောင်တွေမျာပါ ဖြစ်ကြတယ်။
• တဆက်ထဲ လည်ပင်းရိုးဆစ်ကြားထဲက အရိုးနုနဲ့ အာရုံကြောကိုပါ ထိရင် ပိုဆိုးတယ်။
• လူတိုင်း အဲလောက်မဆိုးပါ။ ခေါင်းမူး၊ ခေါင်းကိုက်၊ မျက်စိဝေဝါးတာတွေနဲ့တွဲတာက ဆိုးတယ်။ ရင်ခေါင်းမှာဖြစ်ရင် အထဲ အင်္ဂါတွေ။ ခါးပိုင်းဆိုရင် ဗိုက်ထဲကအင်္ဂါတွေကို သက်ရောင်စေနိုင်တယ်။
• ဆိုးလာချိန်မှာ နာတာပိုခံစားတယ်။
• နေတာ၊ ထိုင်တာ၊ အိပ်တာ ဂရုးစိုက်ပါ။ သက်သာတဲ့ အနေအထားရွေးပါ။ မွေ့ယာ-ပြော့တာ မသင့်ပါ။
• နာတဲ့နေရာ ဥပမာ ပခုံးနေရာမှာ ဖန်ပုလင်းနဲ့ ထုနှက်ပေးဘို့ ခိုင်းတာ ဖတ်ရတယ်။ ဖိအားကို နည်းနည်းကနေ တိုးတိုးပေးရမယ်။ ဘယ်ရော ညာပါလုပ်ပေးရမယ်။ ညအချိန် တီဗွီကြည့်ရင်းလုပ်နိုင်တယ်။
• ကြမ်းမာမာပေါ်မှာ ပက်လက်အိပ်ပါ။ ကျောအောက်မှာ rolling pin ပိုက်လုံးအမာထားပြီး ရှေ့-နောက် ရွေ့ရှားပေးပါ။ တရက်မှာ ၁၅ မိနစ် လုပ်ပါ။ ဒီနည်းက ရုရှားရိုးရာနည်းဖြစ်တယ်။
• ရိုးရိုး အနာ-အကိုက်ပျောက်ဆေးတွေ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ Tylenol, Panadol, Exdol ဖြစ်တယ်။ ဒီလိုအနာသက်သာဆေးကို သောက်မှ ကောင်းတယ်။ နာတာကိုခံနိုင်လို့ မသောက်ချင်တာ မကောင်းပါ။ ရောင်တာကိုပါ သက်သာစေလို့ သောက်သင့်ပါတယ်။
• Cortisone (Corticosteroid) ဆေးကိုလဲ ခံစားရတာ ဆိုးတဲ့အခါမျိုးမှာ သုံးနိုင်တယ်။
• တချို့ကို ခွဲစိတ်ကုသရတယ်။
ကျွန်တော် ဆက်ဆံတိုင်း မပြီးဘူး။ လက်နဲ့ဆို ပြီးတယ် သူနဲ့ဆက်ဆံရင် မပြီးဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတာ ပြောပြပေးပါ။
ခံစားချက်လည်းမရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော် တအားသိချင်နေလို့ပါ။
• Male orgasm ယောက်ျား ပြီးခြင်း အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၁၅)
Jun 17, 2011 at 2:57 AM,
I would like to ask yaaquestion regarding with the possibility of having pregnancy. I'm 24 yrs old n my gf is just 22/ Today we had unprotected sex while she was on her period. I didn't know that she was starting menstruation. We had3times having sex that night but the last time. I have noticed that there were some blood on my penis which freaked me out. I then asked her about it and she said that it was menses blood. It was her first day of this month she said. Can she get pregnant while on period? How many days does it take to be known that she has got pregnant after sex? But obviously I ejaculated my sperms out every single time when we had sex. I would like to know your answer as fast as possible. Please sir as it makes me so worried
• No, not at all Pregnancy after sex during menstruation is impossible It is theoretically safe to have sex5days before, during and next5days after menstruation
Posted by Dr. Tint Swe at 9:04 AM